कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा अर्को हप्ता प्रकाशन गरिने – Samabeshi Khabar
कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा अर्को हप्ता प्रकाशन गरिने
२ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:२५ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, (ससं) । कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा अर्को हप्तामा सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भए पनि अबको १० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएकोहो ।
बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले अबको १० दिनभित्रै कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । विद्यार्थीको नम्बर इन्ट्रीको काम सकिएको र अहिले रुजु चलिरहेको उनले बताएका छन् ।
परीक्षा बोर्डले केन्द्राध्यक्षलाई अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो । तैपनि केन्द्राध्यक्षले भद्रगोल तरिकाले परीक्षाका काम गरेको पाइएको प्रा.डा. पौडेलले भने । ‘वेबसाइटमा राखिदिएको फाइल डाउनलोड गरेर सिम्बोल नम्बरअनुसार माक्स चढाएको भए सहज हुने थियो, अभिमुखीकरण गरेर पनि त्यसअनुसार गरेनन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि पढेर त्यसअनुसारको काम पनि गरेको पाइएन ।’
बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले कोभिडका कारण कक्षा ११ र १२ को कक्षा ढिला सुरु भएकाले जेठसम्म शैक्षिक सत्र कायम गर्न प्रस्ताव गरी शिक्षा मन्त्रालय पठाएको बताएका छन् । जेठसम्म कक्षा सञ्चालन गरी असारमा परीक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ ।